RAHARAHA ANRIAMANDAVY RIANA : Nisy minisitra naka tao amin’ny zandary ny fitoriana | NewsMada
Mbola mitohy ihany hatramin’izao… Minisitra iray no naka ny atontan-taratasy fitoriana an’Andriamandavy Riana tao amin’ny biraon’ny zandary misahana ny heloka bevava (SECRECH) tetsy Fiadanana. Araka ny fantatra dia izay no antony nampihantona io raharaha io, tsy nisy fakana am-bavany, hatramin’izao fotoana izao…
Manoloana ny fitoriana nataon’ny filohan’ny sendikan’ny mpitsara sy ireo fitoriana roa hafa mitodika any amin’ny senatera Andriamandavy Riana VII, nanao fanadihadiana manokana ny teto anivon’ny gazety Free News momba ny hoe: fa maninona no tsy misy tohiny io raharaha io fa toa mangina fotsiny? Olona maromaro no efa nantonina, satria raha tsiahivina dia efa tamin’ny 02 may lasa teo no nipetraka ireo fitoriana ireo saingy 20 andro aty aoriana tsy mbola misy tohiny. Andro vitsivitsy taorian’ny fipetrahan’io fitoriana io teny anivon’ny zandarimariam-pirenena, niala teto Madagasikara ity senatera ity. Andro vitsivitsy lasa anefa izay, tazana teny amin’ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona Ampefiloha, ity loholona ity, tao amin’ny efitrano nisy an-dRazaimamonjy Claudine. Raha fehezina izany dia hoe efa eto Madagasikara izy amin’izao fotoana izao saingy mbola tsy mihetsika ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Fa inona ilay olana? Rehefa nanao fanadihadiana ifotony ny teto amin’ny gazety dia nahafantatra fa nisy minisitra iray tonga teny an-toerana naka ireo antotan-taratasy misy ny fitoriana ity senatera ity. Ny mbola tsy fantatra hatreto dia ny mikasika ny hoe: “iza io minisitra io?”.
Tsy nandray andraikitra
Raha hiverenana, araka ny voalazan’ny andininy faha-85 mamerina any amin’ny andininy faha-73 hatramin’ny faha-79 ao amin’ny lalam-panorenana dia azo atao tsara ny misambotra ity senatera ity. Vesatra maromaro mantsy no hiampangana azy amin’ireo fitoriana miisa telo ireo, isan’izany ny fitarihana olona hitokona, fitorahana vato biraom-panjakana, fivoriana an-dalam-be tsy nahazahoana alàlana, fanalam-baraka ary ny fandrahonana ho faty. Amin’ireo vesatra telo voalohany ireo dia ambodiomby no sady hitan’ny rehetra tamin’ny haino aman-jery ny zavatra nataony. Raha tsiahivina, ny teo anivon’ny tonia mpampanoa lalàna an’ny fitsarana ambony (procureur général de la cour d’appel, ndlr) no nandray an-tànana ireo fitoriana ireo ary nametraka izany teny anivon’ny sampana misahana ny fikarohan-keloka bevava an’ny zandarimariam-pirenena (SECRECH) tetsy Fiadanana tamin’ny andron’io 02 may voalaza tetsy ambony io.
Tsy nandray andraikitra ny zandary
Raha hiverenana ny zava-nitranga, efa tamin’ny 02 may no nipetraka teny anivon’ny zandarimarian’i Fiadanana ity raharaha ity. Raha nandray andraikitra ny zandarimariam-pirenena dia efa vita ity raharaha ity, mbola niandry anefa izy ireo ka lasa tany ivelany io olona io. Rehefa niverina teto Madagasikara anefa io loholona io dia mbola tsy nisy fepetra noraisina, ka izao tonga tamin’ny fisintoman’ny minisitra io antotan-taratasy io izao. « Efa vita hatramin’ny fitsarana raha toa ka vao tonga teny amin’ny zandary dia nandray ny andraikitra tandrify azy izy ireo. Izao anefa lasa niteraka olana be izany satria efa tsy any ampelatanany intsony ny fitoriana”, hoy ny mpahay lalàna iray nanontaniana mikasika ity raharaha ity.
Mbola be ny tsimatimanota
Araka izany, raha fehezina, mbola be ny tsy maty manota raha izao raharaha izao no fotorina. Vao tsy ela mantsy izay, niaro fatratra ny governemantany ny praiminisitra nilaza fa, “tokony ao anatin’ny fanajana ny lalàna tanteraka no hisehatra ny tsirairay fa tsy hoe hampihatra ny lalàna amin’izay mety hitiavantsika azy”. Ny minisitra naka io atotan-taratasy io anefa dia tsy iza fa minisitra ao anatin’io governemantany io ihany. Tokony namboariny araka izany io fanambarany io hoe “aoka tsy hampiasa ny fahefana ananana amin’izay tiana hitiavana azy”. Ny tranga tahaka izao mantsy no tokony hanehoana fandraisana andraikitra ary atao ohatra ho an’ny rehetra. Ny fanjakana izay mamerina matetika fa tsy raharaham-pirenena ny raharaha Razaimamonjy Claudine, izay niaingan’ity raharaha Andriamandavy Riana ity, fa raharahan’olon-tsotra. Raha tena izay tokoa no zava-misy, tokony tsy nisy nidiran’ny minisitra nanao fanelanelanana tamin’ny fakana ireo atotan-taratasy teny anivon’ny zandarimariam-pirenena.